Iikhosi ezili-10 eziphezulu zeAdobe Illustrator kwiKhompyutha | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Lola ifani | | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi, Umzekeliso
1 Ufunda phi kwiAdobe Illustrator kwi-intanethi
2 Izifundo zeAdobe Illustrator zabaqalayo
2.1 Intshayelelo kwiAdobe Photoshop
2.2 I-Illustrator CC yeeNewbies-ukusuka kwiZero ukuya kwiNgcali!
2.3 I-Adobe Illustrator: Umzobo weVector ukusuka ekuqaleni
3 Iikhosi zeAdobe Illustrator Thematic
3.1 I-Adobe Illustrator yesazisi esibonakalayo
3.2 I-Adobe Illustrator yohlobo lokuchwetheza, ukubhala iileta kunye neefowuthi
3.3 Uyilo olushicilelweyo -Lungiselela i-offset kwi-Illustrator
3.4 I-Adobe Illustrator yoYilo
3.5 Ubugcisa beVector: bonisa isitayile sakho nge-Illustrator
4 Izifundo eziphambili zeAdobe Illustrator
4.1 I-Adobe Illustrator ePhambili yomzekeliso
4.2 I-Adobe Illustrator CC-ePhambili: Umlingo weVector. 2021
Ufunda phi kwiAdobe Illustrator kwi-intanethi
Ukuba unomdla kuyilo lwegraphic kwaye ungathanda ukufunda ngakumbi ngomfanekiso wevektha, ungayenza kwikhompyuter yakho, ngaphandle kokushiya ikhaya. Kukho amaqonga amaninzi anikezela ngezifundo ezijolise ekuphuculeni uqeqesho lwakho kwiAdobe Illustrator, enje nge: Domestika, Undemy okanye iCrehana. Unikezelo lubanzi kakhulu, ke, senze ukhetho lweyona khosi ye-Illustrator ebalaseleyo emnatheni, Ke unokukhetha eyona ilungele inqanaba lakho kunye nezinto onomdla kuzo
Izifundo zeAdobe Illustrator zabaqalayo
10h 9m yeevidiyo
Izifundo ezi-5 ezisisiseko zomzekeliso
Le khosi ye intshayelelo kwiAdobe Illustrator, efundiswa nguAarón Martínez, ngu Kukulungele ukuqala kwinkqubo. Njengazo zonke izifundo zeDomestika, nje ukuba uyithenge unokufikelela ngokungenamda, ukuze ukwazi ukuyithatha ngesantya sakho. Igqibelele kakhulu, ineebhloko ezi-6, izifundo ezingama-77 Lilonke, baya kwezona nkcazo zisisiseko kwiingcaciso eziza kukunika inqanaba elaneleyo lokwenza umsebenzi osemgangathweni kule software. Ngale khosi:
Uya kufunda uku jikeleza ujongano kunye nokusebenzisa ezona zixhobo ziluncedo.
Uya kufumanisa njani imifanekiso yedijithali.
Uya kusebenza nemibala, Uya kwenza iipellettes kwaye ufunde umahluko phakathi kweendlela ezahlukeneyo zombala.
Uya kudala izicatshulwa ezinomtsalane.
Uya kufumanisa ungayisebenzisa njani uyilo lwakho ukuzipapasha kwi-intanethi okanye ukuziprinta.
I-Illustrator CC yeeNewbies-ukusuka kwiZero ukuya kwiNgcali!
Izifundo zokufunda zonke iimfihlelo zesfotware
Ukuba injongo yakho funda ukuphatha inkqubo njengengcali, unomdla kuyilo lwegraphic kwaye ungathanda ukufunda ukwenza iilogo okanye imifanekiso, yile khosi obuyikhangela. Inamacandelo ali-10, zizonke iiklasi ezingama-96, apho uya kufumana lonke ulwazi oluyimfuneko lokusebenzisa ezona zimvo zakho zoyilo, nokuba awuzange udlale le nkqubo ngaphambili!
Yikhosi epheleleyo kakhulu, apho yonke into ifundiswa ngokwenza umthambo kunye nokuchukumisa uyilo lwe-3D. Ungangena kule khosi nanini na ufuna, nokuba sele uyigqibile, ungaziphinda izifundo amaxesha amaninzi njengoko ufuna ude uve ngathi uyifumene.
I-Adobe Illustrator: Umzobo weVector ukusuka ekuqaleni
8h 3m yeevidiyo
Funda iziseko zomzekeliso wevektha
Este Ikhosi yasekhaya, Efundiswe ngabasunguli be studio yokudala iMarmota vs Milky, lolunye ukhetho olukhulu lokunika amanyathelo okuqala kwiAdobe Illustrator. Yenziwe Iibhloko ezi-6, izifundo ezingama-58 xa zizonke, apho uya kufunda yonke into malunga isixhobo kunye elungileyo Ibhetri yeengcebiso zokuba wenze imifanekiso yoqobo. Eyona nto intle malunga nale khosi kukuba kunjalo ijolise ekwakheni eyakho iphothifoliyo, ke awuyi kufumana iinkcazo kuphela ngezixhobo kunye neetekhnoloji eziluncedo kakhulu, uya kuba nethuba lokuphefumlelwa kwaye uphuhlise amandla akho okuvelisa izimvo zokuyila.
El Impazamo kuphela kukuba ikhosi ikwisiPhuthukezi, kodwa ungoyiki, ungayenza i sImibhalo engezantsi yespanish nezinye iilwimi ezine.
Iikhosi zeAdobe Illustrator Thematic
I-Adobe Illustrator yesazisi esibonakalayo
7h 30m yeevidiyo
Funda ukuyila uphawu olubonakalayo lwentengiso
Isazisi esibonakalayo yi ukumelwa kwegama lophawuEkuboneni kokuqala, iyakwazi ukudlulisa amaxabiso kunye nomoya kwaye iyanceda ukwahlulahlulahlula kukhuphiswano. I-Adobe Illustrator yesazisi esibonakalayo, yikhosi yaseDomestika apho uya kufunda khona Inkqubo yenkqubo yokuphuhlisa yonke imiqondiso kunye nezixhobo efuzisela uphawu.
Yenziwe Iibhloko ezi-6, izifundo ezingama-48 xa zizonke ziqala kwezona zisisiseko, ke zizonke ilungele abaqalayo.
I-Adobe Illustrator yohlobo lokuchwetheza, ukubhala iileta kunye neefowuthi
3h 39m yeevidiyo
Uyilo lweCalligraphic kwiAdobe Illustrator
Este ipakethi yezifundo ezi-5 zaseDomestika ilungele i- abathandi bamagama kunye nokubhala. Ukubumba okuqala nge ingcaciso ngendlela uMzekeliso asebenza ngayo kwaye malunga nokuhamba ujongano, ungayenza nokuba awazi kwanto malunga nenkqubo. Ngezifundo ezingama-44, uya kufunda:
Lo isisiseko sokuphuhlisa ngokutyibilikayo kwisoftware
Njani ezona zixhobo ziluncedo
Ukuthatha ithuba lokwahluka typographic kunye neefonti zobugcisa ukuzenza zibe zezakho
A yenza iifonti zakho
Iindlela kunye nezixhobo zokufumana ezinye ukugqitywa kobungcali
Uyilo olushicilelweyo -Lungiselela i-offset kwi-Illustrator
Fumanisa indlela yokulungiselela uyilo lwakho ngoshicilelo lwangaphandle
Le khosi yi kubonisiwe kwabo sele beqalisile kwinkqubo ujonge ukufunda okungakumbi malunga nokulungiselela imisebenzi yabo Ukushicilela nge-offset kunye nabasebenzi bokushicilela, abasebenza ngokuzoba okanye abenzi bemizobo abanomdla kule ndawo ikhethekileyo. Baza kuchaza izixhobo eziyimfuneko kulawulo loqobo lokushicilela nge-offset, baya kukuxelela ukusikelwa umda kwale nkqubo yokushicilela kunye neempawu ekufuneka ifayile yoqobo ibenazo. Yi Inkqubo yobungcali, kugxilwe ekufezekiseni iziphumo zobungcali, ukugcina izibonelelo zemali kunye nexesha.
I-Adobe Illustrator yoYilo
3.9 / 5 amanqaku amahle
2h 30m yeevidiyo
I-Adobe Illustrator isetyenziswe kulwakhiwo
Le khosi yile ejolise kubakhi, abayili bangaphakathi, iinjineli zokwakha kunye nabazobi abafuna ukufunda ukusebenzisa Umzekeliso wokubonisa iiprojekthi zakho zokwakha. Imifanekiso inexabiso elisisiseko xa kuziwa ekuboniseni izimvo kubaxumi kwaye ngale khosi uya kuba nakho ukuthatha uyilo lwakho ukuya kwinqanaba elilandelayo. Ikhosi ikwabandakanya intshayelelo yokuphatha isoftware, ke awudingi ukuba uyisebenzise ngaphambili, uya kufunda njengoko usiya.
Ubugcisa beVector: bonisa isitayile sakho nge-Illustrator
4h 58m yeevidiyo
Jonga ubuchule bakho
Ngaba unomdla wokuzoba kunye nomzekeliso? I-Adobe Illustrator yinkqubo ye-quintessential yokusebenza nemifanekiso ye-vector. Kule khosi efundiswe ngumzobi uDaniel Caruso uya kufunda ubuchule obuyimfuneko bokubamba izimvo zakho kwaye uthathe amanyathelo akho okuqala kwihlabathi lobugcisa bevektha. Eyona nto intle kukuba awudingi ukuba ube namava angaphambili okusebenza noMfuziselo kuba, nangona ingesosifundo sokwazisa ngenkqubo, iya kuchaza yonke into ekufuneka uyazi kwaye njani ungazithatha izifundo ngesantya sakho, awuyi kuba nangxaki. Le khosi ingesiNgesi, kodwa injalo Imibhalo engezantsi yespanish.
Izifundo eziphambili zeAdobe Illustrator
I-Adobe Illustrator ePhambili yomzekeliso
11h 22m yeevidiyo
Yiya kwinqanaba elilandelayo
Le khosi nguAarón Martínez yiyo ilungele ukwandisa inqanaba lakho kunye nobuchule kwiAdobe Illustrator. Ukwenza njalo kuyafuneka ukuba uyazi le nkqubo, ke Ukuba awuzange uyisebenzise, ​​kungcono ukuba uqale ngekhosi yokuqala Ukuya kwiAdobe Illustrator esiyicebisayo ekuqaleni kweposti kwaye sikushiyele oku kamva. Yenziwe 5 iibhloko zomxholo, izifundo ezingama-49 xa zizonke, kugxilwe kuwe ekufundeni ezona ndlela ziphambili zemizekelo. Yi ikhosi esebenzayo, Uya kufunda ukwenza imifanekiso kwi isitayileUkulangazelela okuthe tyaba", mkhuba wamva nje kwiwebhu; Uyakuyila intengiso yemascotukuya, ukudlala nge Iiphalethi zemibala kunye neefonti ezahlukeneyo; Kwaye uya kufumanisa ukuba uyilwa njani umzekeliso wokuhlela ngevolumu, usebenzisa ifayile ye Isixhobo se "gradient".
I-Adobe Illustrator CC-ePhambili: Umlingo weVector. 2021
4.8 / 5 ukalisho
Yazi le nkqubo ngokunzulu
Le khosi ifundiswe nguMarlon Ceballos, uMcebisi ngeZicelo zeAdobe, Yi-100% esebenzayo kwaye iya kukunceda usebenzise ezona ndlela ziphambili kunye nezixhobo zale software uyilo lokuthatha umsebenzi wakho uye kwinqanaba elilandelayo. Ngexesha lekhosi, uya kufumana iifayile ukuze uziqhelanise nazo kwaye ekupheleni kweyunithi nganye uya kwenza iprojekthi yokuqinisa yonke into oyifundileyo. Yintoni egqithisile, Ixabiso libandakanya ukufikelela kwiinkonzo ze-Intanethi ezinje ngombala weAdobe okanye usetyenziso lweselfowuni lweAdobe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iikhosi ezili-10 ezilungileyo zeAdobe Illustrator kwi-Intanethi